विश्व वायु प्रदूषण: वास्तविक समय वायु गुणस्तर सूचकांक
वास्तविक समय एयर गुणस्तर डेटा लोड गर्दा पर्खनुहोस्
वायु गुणस्तर स्केल
संवेदनशील समूहहरूको लागि अस्वस्थ
यो वेबसाइट World Air Quality Index Project (विश्व वायू गुणस्तर विवरण योजना) बाट सञ्चालित गरिएको हो।
माथिको मानचित्रले 10,000 भन्दा बढी स्टेशनहरु को वास्तविक-समय अनुसर वायु गुणस्तर देखाउँदछ।
साझेदारी गर्नुहोस्: आज हावा प्रदूषण कसरी छ? 80 देखि अधिक देशहरु को लागि वास्तविक समय वायु प्रदूषण नक्शा को जाँच गर्नुहोस।
नक्सामा तपाईंको शहर भेट्टाउन सक्नुहुन्न?
हामीलाई निकटतम स्टेशन पत्ता लगाउन दिनुहोस्
विश्व एयर गुणस्तर सूचकांक परियोजना बारे
यो वेब कसरी प्रयोग गर्ने
एक विशिष्ट शहरको बारेमा थप जानकारी प्राप्त गर्न, माथिको माथिल्लो नक्साको कुनै झण्डाहरूमा आफ्नो चाल सार्नुहोस्, त्यसपछि पूर्ण वायु प्रदूषण ऐतिहासिक डेटा प्राप्त गर्न क्लिक गर्नुहोस्।
राम्रो संवेदनशील समूहहरूको लागि अस्वस्थ धेरै अस्वस्थ
मध्यम अस्वस्थ खतरनाक
वायु गुणस्तर सूचकांक (AQI) गणना
वायु गुणस्तर सूचकांक (AQI) वायुमा रहेका कण पदार्थ (PM2.5 र PM10), ओजोन (O3), नाइट्रोजन डाइअक्साइड (NO2), सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) र कार्बन मोनोअक्साइड (CO) उत्सर्जनको मापनमा आधारित हुन्छ । नक्सामा देखाइएका धेरै स्टेशनहरुले PM2.5 र PM10 दुवै विवरण मापन गर्दछन्, तर त्यहाँ केही अपवादहरु छन् जहाँ PM10 विवरण मात्र उपलब्ध छन्।
सबै माप प्रति घण्टा मापनमा आधारित छन्: उदाहरणका लागि, यदि ८ बजेमा AQI को सूचना दिइएको छ भने यसको अर्थ ७ देखि ८ बजे सम्मको वायु मापन भएको थियो।
थप जानकारी र लिङ्कहरू
वायु प्रदूषणको विरुद्धमा आफैलाई सुरक्षित राख्न चाहनुहुन्छ?
हाम्रो मुखौटा र हावा शुद्धिकरण पृष्ठ हेर्नुहोस्।
वायु प्रदूषण जान्न चाहानुहुन्छ?
हाम्रो प्राय: सोधिने प्रश्न (अकसर गरेए प्रश्न) पेज जाँच गर्नुहोस्।
वायु प्रदूषण पूर्वानुमान हेर्न चाहानुहुन्छ?
हाम्रो पूर्वानुमान पृष्ठ जाँच गर्नुहोस्।
प्रोजेक्ट र टोली बारे थप जान्न चाहानुहुन्छ?
सम्पर्क पृष्ठ जाँच गर्नुहोस्।
कार्यक्रमिक API मार्फत एयर गुणस्तर डेटा पहुँच गर्न चाहनुहुन्छ?
API पृष्ठ जाँच गर्नुहोस्।
तपाईंको आफ्नै वायु गुणवत्ताको निगरानी स्टेशन चाहानुहुन्छ?
GAIA हवा को गुणवत्ता निगरानी स्टेशनहरु उच्च तकनीक लेजर कण सेन्सर को उपयोग गर्दै छन् वास्तविक समय PM2.5 प्रदूषण मा मापने को लागि, जो एक हानिकारक वायु प्रदूषक मध्ये एक छ।
सेट अप गर्न सजिलो छ, उनीहरूलाई मात्र एक वाइफाइ पहुँच पोइन्ट र एक USB पावर आपूर्ति चाहिन्छ। एकपटक जडित भएपछि, वायु प्रदूषण स्तरहरू तुरुन्तै र हाम्रो नक्सामा वास्तविक समयमा रिपोर्ट गरिन्छ
अहिले तपाईंको आफ्नै GAIA गुणस्तर निरीक्षण स्टेशन पाउनुहोस्!
AQI मापनको लागि माथिको नक्शामा US EPA standard Instant Cast रिपोर्ट सूत्रमा आधारित वास्तविक समय प्रदूषण अनुक्रमणिकाको प्रयोग गरिएको छ
IQA स्वास्थ्य प्रभाव सावधानी वक्तव्य
0 - 50 राम्रो वायु गुणलाई संतोषजनक मानिन्छ, र वायु प्रदूषणले सानो वा कुनै खतरा उत्पन्न गर्दछ कुनै पनि होइन
50 - 100 मध्यम वायु गुणस्तर ठिक्कको छ; तैपनि, धुँवाधुलोदेखि सम्वेदनशील केही व्यक्तिका लागि सामान्य रूपमा हानिकारक हुन सक्छ। सक्रिय बालबालिका तथा वयस्कहरु र दम जस्ता श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग भएका मानिसहरुले लामो समय सम्मको बाहिरी गतिविधि सीमित गर्नुपर्छ।
100 - 150 संवेदनशील समूहहरूको लागि अस्वस्थ संवेदनशील समूहका सदस्यहरुले स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रभावहरु अनुभव गर्न सक्छन् । सामान्य मानिसहरु प्रभावित नहुन सक्छन् । सक्रिय बालबालिका तथा वयस्कहरु र दम जस्ता श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग भएका मानिसहरुले लामो समय सम्मको बाहिरी गतिविधि सीमित गर्नुपर्छ।
150 - 200 अस्वस्थ सबैलाई स्वास्थ्य प्रभावहरू अनुभव गर्न सुरु हुन सक्छ; संवेदनशील समूहका सदस्यहरूले अधिक गम्भीर स्वास्थ्य प्रभाव अनुभव गर्न सक्छन् धेरै हिंड्डुल गर्नुपर्ने बच्चाहरु र वयस्कहरु, साथै दमका रोगी लगायत श्वासप्रणालीका रोगीहरुले धेरैबेर बाहिर बिताउनु हुँदैन; अरु व्यक्तिहरु, विशेष गरी बच्चाहरुले भने सकेसम्म धेरैबेर बाहिर बिताउनु हुँदैन।
200 - 300 धेरै अस्वस्थ आपतकालीन अवस्थाहरूको स्वास्थ्य चेतावनी। पूरै आबादीलाई अधिक प्रभावित हुने सम्भव छ। सक्रिय बच्चाहरु र वयस्कों, र श्वसन रोग संग मान्छे, जस्तै अस्थमा, सबै बाह्य परिवेश देखि बचने को लागि; सबैलाई, विशेष गरी बालबालिकाहरू, बाहिरको बाह्य उत्साह सीमित गर्नुपर्छ।
300 - 500 खतरनाक स्वास्थ्य अलर्ट: सबैले अधिक गम्भीर स्वास्थ्य प्रभाव अनुभव गर्न सक्छन् सबैजनाले सबै बाहिरको बाहिरी भागबाट जोगिनै पर्छ
सबै श्रेय विश्वव्यापी ई.पि.ए. (पर्यावरण संरक्षण एजेन्सीहरु) मा जानुपर्छ किनकि यो सबै कार्य उहाँहरुको कामबाट मात्र सम्भव भएको हो । सम्पूर्ण विश्वव्यापी ई.पि.ए. सूची हेर्न यहाँ यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
प्रकाशनको समयमा सबै वायु गुणस्तरहरू अप्रमाणित गरिएका छन्, र गुणस्तर आश्वासन अनुसार यी डाटा संशोधन नगरी, कुनै पनि समय बिना। विश्व एयर गुणस्तर सूचकांक परियोजनाले यस जानकारीको सामग्रीहरू संकलन गर्न सबै उचित योग्यता र हेरविचारको अभ्यास गरेको छ र कुनै पनि परिस्थितिमा कुनै एक परिस्थितिले विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक' प्रोजेक्ट टीम वा यसको एजेन्टरले कुनै पनि हानि, क्षति वा क्षतिपूर्तिको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यो डेटाको आपूर्तिबाट उत्पन्न हुने सम्झौता, अत्याचार वा अन्यथामा जिम्मेवार हुन सक्छ।